Sicario – Mood for Movies
ရုပ်ရှင်ကို စဖွင့်တော့ Sicario ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ Sicario ဆိုတာ Mexico မှာ Hitman တဲ့။
ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ပထမဆုံး အခန်းသည် ဒီနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ပိတ်ကားပေါ်မှာ မမြင်ရခင်ကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေအောင် စွမ်းဆောင်နေသည်မှာ Johann Johannson ရဲ့ခပ်ပြင်းပြင်း တီးခတ်နေတဲ့ နောက်ခံ Music Score ပါပဲ။ ရုပ်ပုံတွေ မလာခင် Tempo တစ်ဖြည်းဖြည်း မြင့်လာလေလေ ပထမဆုံး မြင်ရမဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့လေလေပါပဲ။
ပူပြင်းတဲ့ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုရဲ့ဖုန်မှုန့်တွေကြားထဲမှာ US စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအချို့ဒေါသပြင်းပြစွာ Arizona ရဲ့မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ စိုင်းပြင်း၍ မောင်းနှင်လာကြသည်။ ထိုသည်မှာ စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုကို စတင်တော့မည် နမိတ်ပုံပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဟုန်ထိုး ခုန်ပေါက်နေတဲ့ ထိုကားတစ်စီးထဲမှာ သူမကို ကျွန်တော်တို့စတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမရဲ့မျက်နှာတွင် အားရကျေနပ်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကင်းမဲ့နေသည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပေသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် ထို Humvee ထဲတွင် ရောက်ရှိသယောင် ခံစားရအောင် တင်ပြနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ တစ်ကယ်တော့ သူတို ဟာ FBI ရဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကို လိုက်လံရတဲ့ SWAT Team တွေပါ။
Video Game တစ်ခုကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အခန်းထဲကို ထို Humvees တစ်စီး အရှိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်ထိုးဖောက်လာကာ Mexican Cartels တွေနဲ့US FBI အဖွဲ့တို့နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ နောက်5Minutes သည် ဒီနှစ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။ ထိုနေ့ထိုနေရာမှာပဲ သူမနှင့် သူမအဖွဲ့တို့သည် မထင်မှတ်ထားသော အရာများကို ထို အဆောက်အအုံထဲမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာများမှာ မြောက်များစွာသော လူသေကောင်တွေကို ပလတ်စတစ်များနှင့် ထုပ်ပိုးထားကာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် နံရံတွေကြားထဲမှာ သိုဝှက်ထားခြင်းပင်။ ထိုနေ့မှာပဲ Cartels များထောင်ခဲ့သော Booby Trap ကြောင့် Officers2ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားရဲ့အဖွင့်အခန်းကို ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်လောက် မည်သည့်ရုပ်ရှင်ကိုမှ မနှစ်သက်ခဲ့။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ Cinematic Opening လောက်လဲ မည်သည့်ရုပ်ရှင်မှ Stronger မဖြစ်ခဲ့ပေ။
သူမရဲ့နာမည်သည် Kate Marcer.
သူမရဲ့ရာထူးက FBI Special Weapon and Tactics Teams Agent.
Idealist သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်း သူမသည် တာဝန်ယူခြင်းဆိုသော Responsibility ကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမရဲ့အမှားကြောင့် Officers2ယောက် ကျဆုံးရခြင်းအပေါ် သူမရဲ့တာဝန်ယူတတ်မှုသည် သူမကို ထို Mexican Cartels တွေရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကို လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆီး နှိုမ်နှင်းတဲ့ Matt Graver ဆိုသော လူတစ်ယောက်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ အမိန့်မပါပဲ Volunteer ဝင်လာခဲ့သည်။ Matt ကို ကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့လည်း သူ့ရဲ့အသွင်ပြင်နဲ့တင်အလွယ်တကူ အထင်မြင် သေးနိင်ပေသည်။ ဘာကြောင့်ဆိုသော် အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင် သူတစ်ဦးတည်းသာ သာမန်အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ထားကာ Flip-Flop ကိုပင် စီးထားသေသည်။ သို့သော် သူသည် တာဝန်နှင့်အလုပ်ကို ကောင်းစွာ ပိုင်းခြားနိုင်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ်ကို သူသာလျှင် အကျွမ်းကျင်ဆုံး လူတစ်ယောက်ပင်။ Kate သည် Volunteer အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတော့ မေးသောမေးခွန်းတွေသည် ထိုစစ်ဆင်ရေးကို ပိုမို သိလိုစိတ် ပြင်းပြစေခဲ့သည်။
သူမအတွက် တာဝန်ကို မေးတော့ Matt ရဲ့စကားလုံးတွေကတော့ “To overact dramatically.” ဆိုပြီး သူမကို အထင်သေးခဲ့ခြင်းကို ဖော်ပြနေခဲ့သည်။
Texas ရဲ့El Paso ကို သွားမဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ သူမ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူက စကားများများ မပြော။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတဲ့ စကားတိုင်းသည် အရေးပါသော စကားများဖြစ်သည်။ သူသည် ထူးဆန်းသော သူတစ်ယောက်.. သူ တွင် အတိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေပေလိမ့်မည်။ သူ့ရဲ့အတိတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခန်းတွင်မှ သိခဲ့ကြရသည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် အိပ်ပျော်နေရင်း တစ်ခါတစ်ရံ သူသည် ကယောင်ကတန်း လန့်လန့်နိုးတတ်သည်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေရဲ့ခြောက်လှန့် ခြင်းတွေပင်။ သူ့နာမည်ကတော့ Alejandro Gilick တဲ့။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ သွားနေစဉ်ပင် သူမသည် သူမတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကို သိလာခဲ့သည်။ အမှန်တော့ El Paso ကို သူတို့သွားနေခြင်းမဟုတ်။ Mexico ရဲ့Juarez ကို သွားနေခြင်းပင်…ဒီလိုနဲ့သူမသည် Mexican Cartels တွေနဲ့US Government တွေရဲ့ကြားထဲက ရှုပ်ထွေးကြီးမားပြီး နိုင်ငံရေးပရိယာယ်တွေနဲ့ပြည့်ကြပ်နေတဲ့ Drug Wars တွေထဲကို ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ ငါးတစ်ကောင်အလား မသိမသာ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပေတော့သည်……
Emily Blunt သည် သူမရဲ့Badass Role အဖြစ် Edge of Tomorrow မှာ ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ယခုဒီရုပ်ရှင်တွင်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ သူမကို Edge of Tomorrow ထဲကလို ဇာတ်ကောင်မျိုး Sarah Corner လို ဇာတ်ကောင်မျိုးတစ်ယောက်အဖြစ် တွေ့မြင်လိုက်ရပေမယ်လို့တော့ ထင်မထားလိုက်ပါနဲ့ ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထိုရုပ်ရှင်ကို မကြည့်ခင်က ထိုကဲ့သို့ထင်ထားခဲ့မိတာ ကျွန်တော် မှားခဲ့မိတယ်။ ထိုအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် ဒီရုပ်ရှင်သည် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်သည် ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့Main Character Central Character ဖြစ်ပေမဲ့ သူမသည် အရေးပါသော ဇာတ်ကောင် မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်တို့သူမကို ပြုံးရယ်ခြင်းမရှိသောပျော်ရွှင်မှုတွေ ကင်းမဲ့နေသော ထိခိုက်ခံနေရသော ခံနိုင်ရည် မရှိသော မိမိနဲ့မအပ်စပ်တဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ ရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့စွာ မျော့လွင့်နေရသော မိန်းမသားတစ်ဦး အဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူမသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင် မဆန်သော ပြင်ပမှ လူသားတစ်ဦးအဖြစ် ပိုဆန်သော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရန်သူနှင့် ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုင်းတွင် သူမသည် အနိုင်ရမှု မရှိခဲ့သည့်အပြင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြေက်လန့်ခြင်းတွေကိုပါ တိတ်တခိုး တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ သို့သော် သူမသည် သူမ စောင့်ထိန်းရမဲ့ Morality နဲ့Responsibility ကိုတော့ အထိန်းနိုင်ဆုံး လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင် တစ်ကားလုံးကို အစ မှ အဆုံးထိ သူမရဲ့အမြင်တွေဘက်ကနေပဲ ရိုက်ကူး တင်ပြသွားသည်။ သူမ သိလိုစိတ်တွေ ပြင်းပြနေချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့လည်း Matt နဲ့Alejandro တို့ရဲ့တိတ်တခိုး စစ်ဆင်ရေးကို သိချင်နေခဲ့သည်။ သူမကိုယ်တိုင် သိခဲ့ရ၍ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့လည်း တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူမကြောက်လန့်နေချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သူမကဲ့သို့ထိတ်လန့်နေခဲ့ရသည်။ တစ်ကယ်တော့ သူမသည် သူမအရင်က တတ်ကျွမ်းခဲ့သော ပညာရပ်များကို ဒီစစ်ဆင်ရေးတွင် အသုံးချခြင်း မရှိခဲ့ရပဲ ယောင်္ကျားသားများ ကျင်လည်နေတဲ့ လောကကြီးမှာ တစ်ကိုယ်တည်းသော မိန်းမတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပင်။ နောက်ဆုံးတွင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်သွားကိုယ်တိုင် ကိုပင် သူမ သိရှိရသည့် အချိန်တွင်မှ ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး သိခဲ့ရလေသည်။ ထိုသည်မှာ Director Denis Villeneuve ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တစ်ကားလို့ကြွေးကြော်ခြင်းကို ခံခဲ့ရစေတဲ့ Masterpiece အစွမ်းတွေပင် ဖြစ်ပေသည်။
ပါဝင်ထားကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေမှာ Emily Blunt နဲ့အတူ Josh Brolin နှင့် Benicio Del Toro တို့ပဲ ဖြစ်ပြီး သိသာ ထင်ရှားစွာ ကောင်းမွန်နေခဲ့သည်မှာ Benicio ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် သေချာစွာ ရဲရဲကြီး ပြောနိုင်သည်မှာ ဒီဇာတ်ကားသည် သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်တွင် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကား ပင်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် Oscar ပါ လျာထားခံနိုင်ရပေသည်။ တစ်ကယ်တော့ သူ့အတွက်တော့ ယခုကဲ့သို့Cartels ဇာတ်ကားများသည် မထူးဆန်းတော့ပေ။ သူသရုပ်ဆောင် လောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်က 1990 tv mini series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Drug Wars: The Camarena Story မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် Traffic ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ Mexican Police Officer ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ Cartel တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက်လည်း Oscar ရခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မကြာသေးမီကပဲ Savages ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ Miguel ‘Lado’ Arroyo ဆိုတဲ့ Columbian Druglord တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Pablo Escobar အဖြစ် Escobar: Paradise Lost မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကို ပြောနေရချိန်မှာ Director နဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုပဲ ပြောနေလို့မပြီးသေး။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ လူ ၂ ယောက်ကတော့ Cinematographer Roger Deakins နဲ့Music Score ဖန်တီးရှင် Johan Johannsson တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်း မေ့ထားပြီး ထိန်ချန်ထားလို့မဖြစ်သေးပေ။ ကျွန်တော်တို့တွေ Ominous တွေ Groaning ဖြစ်တဲ့ Soundtrack တွေကို နောက်ဆုံး ကြားခဲ့ရတာ Inception မှာပဲလေ။ Inception နောက်ပိုင်းမှာ မည်သည့်ရုပ်ရှင်တွင်မှ ထိုကဲ့သို့သော် Eardrum ကောင်းကောင်း အလုပ်ခံရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ဒီ Sicario ပဲဖြစ်ပြီး ထို Score တွေကပဲ ပရိသတ်တွေကို ရင်တဖိုဖို နဲ့ ဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ထို Score ကို ခံစားဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ကြည့်ပါ။ မိမိရဲ့အိမ်တွင် ကြည့်ပါက Volume ကိုတင်ထားပါ။ နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Roger Deakins ရဲ့Cinematography ကတော့ ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကြည့်ခဲ့ဖူးသမျှ ရုပ်ရှင်တွေထဲတွင် အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်သည်။ လှပခြင်းထက် သရုပ်မှန်ကို ပိုဦးစားပေးထားသည်။ Cameras တွေ အများကြီး သုံးပြီး Fast Cuttings တွေကို ရှောင်ထားပြီး Single Storyboard နဲ့ Single Camera ကိုပဲ Action ခန်းတွေမှာတောင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လည်း ပိုမိုပြီး သရုပ်မှန် ဖြစ်ခဲ့နိင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒီဘက်ခေတ် Action ကားတွေမှာ Exciting ဖြစ်အောင် ရိုက်နိုင်ပေမဲ့ Perspective ကင်းမဲ့နေခြင်းကြောင့် ကျွန်တော် ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့Perspective ကို ပိုမို ဦးစားပေးထားတဲ တင်ပြချက်တွေကို နှစ်သက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ “ If you didn’t stay centred in Kate’s point of view of the whole thing, then you’d lost it. It’s grounded in her experiences: I think that’s really important.”
ထို့အပြင် ယခု ရုပ်ရှင်တွင် Arial Shots တွေကို Artistic အဆန်ဆုံးနဲ့Emotional အဆန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပါ ရိုက်ကူးတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် နှစ်သက်မိတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ Bad Guys တွေက ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ပြီး ကြီးမားတဲ့ Action ခန်းတွေကို တမင်ဖန်တီးထားခြင်းမရှိပဲ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်နေရတာထက် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကို မိမိကိုယ်တိုင် ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေခြင်းပင်။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့တစ်နေရာတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့ တစ်ခန်းပါဝင်ခဲ့သည်။ Alenjandro သည် ထိုလူနားကို နီးကပ်စွာ တိုးသွားသည်။ ရေသန့်ဘူးကြီး တစ်လုံးကိုလည်း အစကတည်းက သယ်ဆောင်လာကာ အနားတွင် ထား ထားသည်။ အခန်းထဲတွင် ကျန်သူများအားလုံး ထွက်သွားကြပြီး Matt တစ်ယောက်ပဲ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိ ကြည့်ရှူရန် ကျန်နေခဲ့ပြီး ထွက်သွားသော လူများထဲမှ တစ်ဦးသည် Recording Video Camera ကို တောင် ပိတ်သွားခဲ့သည်။ ဘာဆက်ဖြစ်သည်ကို မပြသွားခဲ့ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်တော့ ကျန်ရစ်နေခဲ့သည်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အကြိုက်ဆုံး တစ်ခန်းကို ပြောပြခဲ့မယ်။ Tunnel ထဲတွင်.. သူမနှင့် စစ်သားများ…
ရုပ်ရှင်ရဲ့အဓိက အကြောင်းအရာကတေ့ာ Righteous ဆန်ခြင်းနဲ့Justice ဆိုတဲ့အရာ ၂ ခုကြားမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မည်ကဲ့သို့စောင့်ထိန်းမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့3 ရက်အတွင်းမှာတွင် အရာအားလုံးသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ကြည့်ဖူးသမျှ ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲတွင် အဘက်ဘက်မှ အပြည့်ဆုံဆုံး တင်ပြထားနိုင်ခြင်းအတွက် ဒီနှစ်ရဲ့Personally အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အသိနှင့် အမြင်ကြားရှိ အလွှာပါးပါးလေးကို လှန်ချပေးနိုင်ခဲ့သော ယခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တစ်ကား ဖြစ်ခဲ့လေတော့သည်။
US President Nixon က 1971 တွင် US ရဲ့No.1 Public Enemy သည် Drug Abuse ဖြစ်သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့သည်။ US သည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းမြောက်များစွာ အကုန်ကျခံကာ Drug Problems တွေကို တားဆီးခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့အထိ အောင်မြင်မှုက Zero ပါ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တင် ပိုမို ဆိုးရွားတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိလာနေပါပြီ။ DEA က US ထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ Columbia ကနေ တိုက်ရိုက်ကြီး ဝင်ရောက်လာတဲ့ Drugs တွေကို Florida ကနေ တားမြစ်လိုက်တော့ ထို Drugs တွေသည် Mexico မှာ သောင်တင်ကုန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် Mexico သည် ဘိန်းလုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ရာ အကောင်းဆုံးသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် စိတ်မကောင်းစွာ ရပ်တည်နေလာရပေတေ့ာသည်။
“You are asking me howawatch works. For now, let’s just keep your eyes on the time.”